संघ – Page 744 – Halkaro
साना तथा मझौला उद्योगीबीच अन्तरक्रिया
चितवन । चितवनमा जारी चितवन महोसव अन्र्तरगत मंगलबार साना तथा मझौला उद्योगी ब्यवसायका लागी गुणस्तर ब्यवस्थापन कार्यशाला गोष्ठिको आयोजना गरिएको छ । उद्योग वाणिञ्य संघ चितवनको सभाहलमा आयोजना गरिएको गोष्ठिले जिल्लामा रहेका साना तथा मझौला उद्योगी ब्यवसायीले आफ्नो गुणस्तरीय उत्पादन गरी उपभोक्तालाई कसरी सन्तुष्टी दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा ब्यवसायिहरुलाई जानकारी दिईएको गोष्ठि तथा सेमिनार समितिका […]
काठमाडौँ । सांसदहरूले पुस २७ गते पृथ्वी जयन्तीको दिन सार्वजनिक विदा दिन माग गरेका छन् । लाई राष्ट्रिय एकता दिवस मानेर पुस २७ गते सार्वजनिक विदा दिन संसदहरूले माग गरेका हुन् । व्यवस्थापिका संसदको मंगलवारको बैठकमा सुन्य समयमा बोल्दै एमाले सांसदहरुले पृथ्वी नारायण शाहको योगदानलाई स्मरण गर्न राज्यले सार्वजनिक विदा दिनुपर्ने माग गरेका हुन् । […]
मेघौली विमानस्थलको सञ्चालन देखि गोलाघाटको समयमै सम्पन्न गर्ने प्रधानमन्त्रीको अाश्वासन
प्रकाशित मिति : २०७३, २६ पुस मंगलवार January 10, 2017
चितवन । सोमबार चितवन अाइपुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चितवनबासीलाई वन्यजन्तुको आक्रमणबाट जोगाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । उनले निकुञ्जबाट निस्कने वन्यजन्तुको अाक्रमणबाट यस क्षेत्रका स्थानीयलार्इ जोगाउन तारजालीको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्दता जनाएका छन् । चितवनको समग्र विकासको लागि छिट्टै प्याकेज ल्याउने भन्दै उनले नारायणगढ-गोलाघाट मोटरबाटो र गोलाघाट पुल निर्माण गर्ने आश्वासन दिए । त्यस्तै चितवनको मेघौलीमा […]
जंगली हात्तीको अाक्रमणबाट भारतीय पर्यटकको मृत्यु
काठमाडौँ । पर्यटकीय नगरी चितवनको सौराहामा जंगली हात्तीको आक्रमणबाट एक भारतीय पर्यटकको मृत्यु भएको छ । परिवारसहित नेपाल घुम्न आएकी भारतको गुजरात, मराबादकी २२ बर्षीया स्नेहा कानपाराको हात्तीको अाक्रमणबाट मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । उनका आमा बुबा भने सकुशल छन् । रनपा-१८ सौराहाको हात्ति प्रजनन् केन्द्र अवलोकनका लागि गएकी स्नेहालाई प्रजनन् केन्द्रमा आएको जंगली […]
नयाँ शक्तिका संयोजक भट्टरार्इलार्इ ध्यानाकर्षण पत्र: गल्ती भए माफ पाउँ, माफीले नपुगे कारवाही पाउँ
प्रकाशित मिति : २०७३, २६ पुस मंगलवार January 11, 2017
श्री डा. बाबुराम भट्टराईजी संयोजक नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल विषयः ध्यानाकर्षण गराएको बारे । महोदय, तपाई तत्कालीन एमाओवादी पार्टी छोडेर नयाँ शक्ति निर्माण अभियानमा लागेकेै दिनबाट म पनि यो अभियानमा सामेल भएको हुँ । मैले बुझेसम्म माक्र्सको द्वन्दात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद मान्ने , पाँच “स”लाई नयाँ शक्तिको सैद्धान्तिक प्रस्थान विन्दु मान्ने, प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको मान्यता अनुरुप पार्टी […]
कार्कीलार्इ कालोमोसो दल्ने विद्यार्थी नेता रिहा गर्न माग गर्दै विद्यालय बन्द
काठमाडौँ । लोकमान सिंह कार्कीलार्इ कालोमोसो दल्ने अाफ्ना विद्यार्थी नेताको रिहाइको माग गर्दै विप्लव नेतृत्वको नेकपा माअाेवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीले मंगलबार शैक्षिक हड्ताल गरेको छ । उनीहरूको बन्दका कारण राजधानीसहितका देशभरका शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भएका छन् । अाधिकारीक रूपमा घोषणा नभएको बन्दका कारण विद्यार्थीहरू मर्कामा परेका छन् । संगठनले विद्यालय सञ्चालकलार्इ फोन गरी विद्यालय नखोल्न […]
मेस्सीलार्इ उछिन्दै रोनाल्डो फिफा वर्ष खेलाडी
काठमाडौँ । विश्व फुटबल महासंघ फिफाले यस बर्षदेखि सुरु गरेको फिफा बेस्ट प्लेयर अवार्डको उपाधि पोर्चुगिस स्टाइकर तथा स्पेनिस क्लव रियल मड्रिड स्टार क्रिष्टियानो रोनाल्डोले जितेका छन् । जुरिचमा आयोजित समारोहमा ३१ बर्षीय रोनाल्डोले बेस्ट प्लेयरको अवार्ड हात पार्ने क्रममा बार्सिलोनाका अर्जेन्टाइन स्ट्राइकर लिओनल मेस्सी र एथ्लेटिको मडि्रडका फ्रेन्च स्ट्राइकर एन्टोइन गि्रजम्यानलाई पछि पारे । […]
के हेर्दै छ सरकार ? सात महिनादेखि भारतीय जेलमा छन् निर्दोष बीस नेपाली
कञ्चनपुर । जिल्लाका बिस भन्दा बढी नेपाली भारतको जेलमा सात महिना देखि बन्दी जीवन विताइरहेका छन् । यहाँबाट भारतको हिमाञ्चल प्रदेशको किनौरामा रहेको स्पेसल हाइड्रोपावर पटेल कम्पनीमा काम गर्न पुगेका २० नेपाली त्यहाँको जेलमा बन्दी जीवन विताइरहेका हुन् । मजदुरको तलब बढाउन माग गर्दै अान्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूलार्इ कम्पनी प्रशासनले प्रहरीलार्इ बुझाएको हो । मजदुर युनियन […]
१६ महिनाकै अन्तरमा तेस्रो सन्तान जन्माउँदा खोज्दा मृत्युको मुखमा
खोटाङ । १६ महिनाको अन्तरमा तेस्रो सन्तान जन्माउँन खोज्दै यहाँकी एक महिला मृत्युको मुखमा पुगेर फर्किएकी छन् । १६ वर्षकै अन्तरमा तेस्रो सन्तानलार्इ जन्म दिने क्रममा रहेकी जिल्लाकी दोर्पा चिउरी डाँडा-७ की इन्द्रकुमारी भुजेलको कोखबाट अप्रेसन गरी बच्चा निकालेर उनलार्इ बचाइएको छ । सुत्केरी ब्यथाका क्रममा उनको पाठेघर फुटेको थियो । पाठेघर फुटेपछि अप्रेसन गरी […]
लोकमानको बर्हिगमन पछि अख्तियारले समात्यो ठूलो माछो
प्रकाशित मिति : २०७३, २५ पुस सोमबार January 11, 2017
काठमाडौँ । अख्तियारको प्रमुखमा नियुक्त भएसँगै ठूलो माछो समाउँछु भन्दै हिँडेका लोकमान सिंह कार्की साना सिद्रामै अल्झिएर आँफै गए । उनको नियुक्तिलाई सर्वोच्चले वदर गरेको अर्को दिन अख्तियारले अहिलेसम्मकै ठूलो भ्रष्टाचारको मुद्दामा निलम्वित सांसद विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निलम्वित सांसद सञ्जय साहले पदीय दुरुपयोग गरी साढे ३१ करोड रुपैया […]